Ukuba ubusazi isipho sikaThixo | Apg29
Abantu abaninzi namhlanje bahlala ngokungazi zizonke ngoThixo ubomi enikeza yena.
Amazwi eBhayibhile abhalwe ngabantu, kodwa amagama ziphefumlelwe nguThixo. Eli bhinqa akazange ekuqaleni, kodwa kamva, esibe sithetha naye. Xa uthathe inxalenye yeBhayibhile, baqonde ukuba xa uthatha inxaxheba ilizwi likaThixo, wezulu nehlabathi. Kwaye isithembiso kulo mzekelo kukuba unokuba umthombo ngaphakathi kwenu. Umthombo abenza kakuhle kwaye awupheli owomileyo. Ngoko akukhangeli ngapha phaya. Wena ke ndinabo ubomi ngaphakathi kwenu. UMoya kaThixo ufuna ndihlale kuni. Ufuna ukukunceda aphile ubomi bobuKristu. Yinto emangalisayo. A isipho sobomi, uxolo, uthando kunye novuyo. Zonke ngenxa oko uYesu asenzele kona ngokufa nokuvuswa kwakhe. Oku, umhlobo wam, ukuba mkhulu kunayo eli amaqula hlabathi ezaphukileyo. Isono uphelelwa isibheno wayo xa ufika ukuze uxhamle isipho sikaThixo.
Indlela ukufumana isipho sikaThixo?